ချိုမြိန်သော နတ်ဆိုး (သို့မဟုတ်) သကြား – Barnyar Barnyar
ချိုမြိန်သော နတ်ဆိုး (သို့မဟုတ်) သကြား
သကြားကြိုက်သူများသတိ။တရက်လျှင် သကြား တစ်ဇွန်းကို လိုအပ်သည်ထက် ပို၍စားလျှင် တစ်နှစ်ပြည့်သောအခါ သင်၏ ခန္ဓာကိုယ် ထဲတွင် ၃၆၅ ဇွန်းစာမျှသော သကြားများစုမိသွားပါ မည်။
ဒီသကြားတွေက အခြားအစားအစာတွေလို ကိုယ်ထဲက ပြန်ထွက်မသွားပါ။ ထရိုင်ဂလစ်စရိုက် ဆိုသော အဆီတစ်မျိုး အဖြစ် ကိုယ်ခန္ဓာ ထဲတွင် ကိန်းအောင်းနေပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ နေရာတကာတွင် စုနေပါတယ်။ သွေးကြော နှလုံး စတဲ့ နေရာတွေရဲ့ နံယံတွေမှာလဲ တဖြည်းဖြည်း စုပုံလာပါတော့တယ်။
အဲဒီအခါ သွေးကြော ကျဉ်းခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း၊ သွေးကြောမှ သွေးခဲများ ဖြစ်စေခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သွေးခဲဟာ သွေးစီးကြောင်းမှာ ပါသွားပြီး ဦးနှောက်တွင်းသို့ ရောက်လျှင် သွေးကြောပိတ်တတ်ပါတယ်။ လေဖြတ် တယ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ သွေးကြောဆိုတာ ကိုယ်ခန္ဓာ နေရာတကာမှာ ရှိလို့ ခန္ဓကိုယ် နေရာတကာမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ . သွေးကြောကိုလဲ ကျဉ်းစေပါတယ်။
ခြေထောက်မှာ သွေးကြောပိတ်ရင် ခြေထောက် ပုတ်ပါ တယ်။ နှလုံးမှာ ပိတ်ရင် နှလုံး ရောဂါရပါတယ်။ အဲဒီ အဆီတွေကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ထုတ်ချင်ရင် လမ်းလျှောက်ခြင်း ရေကူးခြင်း စက်ဘီးစီးခြင်း စတဲ့ ချွေးထွက်စေမဲ့ ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း တခုခု သော်၎င်း ကာယခွန်အားစိုက်ထုတ်ရတဲ့ အလုပ်ကြမ်းကို သော်၎င်း လုပ်ရပါတယ်။ အချိုရည်သံဘူး (330ml) တစ်ဘူးလျှင် သကြား ၁၀ ဇွန်း စာမျှ ပါဝင်ပါသည်။
Credit: Dr Myint Nyein
တရကျလြှငျ သကွား တဈဇှနျးကို လိုအပျသညျထကျ ပို၍စားလြှငျ တဈနှဈပွညျ့သောအခါ သငျ၏ ခန်ဓာကိုယျ ထဲတှငျ ၃၆၅ ဇှနျးစာမြှသော သကွားမြားစုမိသှားပါ မညျ။
ဒီသကွားတှကေ အခွားအစားအစာတှလေို ကိုယျထဲက ပွနျထှကျမသှားပါ။ ထရိုငျဂလဈစရိုကျ ဆိုသော အဆီတဈမြိုး အဖွဈ ကိုယျခန်ဓာ ထဲတှငျ ကိနျးအောငျးနပေါတယျ။ ကိုယျခန်ဓာ နရောတကာတှငျ စုနပေါတယျ။ သှေးကွော နှလုံး စတဲ့ နရောတှရေဲ့ နံယံတှမှောလဲ တဖွညျးဖွညျး စုပုံလာပါတော့တယျ။
အဲဒီအခါ သှေးကွော ကဉျြးခွငျး၊ ပိတျခွငျး၊ သှေးကွောမှ သှေးခဲမြား ဖွဈစခွေငျးတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ သှေးခဲဟာ သှေးစီးကွောငျးမှာ ပါသှားပွီး ဦးနှောကျတှငျးသို့ ရောကျလြှငျ သှေးကွောပိတျတတျပါတယျ။ လဖွေတျ တယျလို့ ချေါကွပါတယျ။ သှေးကွောဆိုတာ ကိုယျခန်ဓာ နရောတကာမှာ ရှိလို့ ခန်ဓကိုယျ နရောတကာမှာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ . သှေးကွောကိုလဲ ကဉျြးစပေါတယျ။
ခွထေောကျမှာ သှေးကွောပိတျရငျ ခွထေောကျ ပုတျပါ တယျ။ နှလုံးမှာ ပိတျရငျ နှလုံး ရောဂါရပါတယျ။ အဲဒီ အဆီတှကေို ခန်ဓာကိုယျထဲက ထုတျခငျြရငျ လမျးလြှောကျခွငျး ရကေူးခွငျး စကျဘီးစီးခွငျး စတဲ့ ခြှေးထှကျစမေဲ့ ကိုယျကာယ လကေ့ငျြ့ခနျး တခုခု သျော၎င်းငျး ကာယခှနျအားစိုကျထုတျရတဲ့ အလုပျကွမျးကို သျော၎င်းငျး လုပျရပါတယျ။ အခြိုရညျသံဘူး (330ml) တဈဘူးလြှငျ သကွား ၁၀ ဇှနျး စာမြှ ပါဝငျပါသညျ။